Madaxweynaha Ruushka ma wuxuu doonayaa inuu abid dalkaas maamulo? | Xaysimo
Home War Madaxweynaha Ruushka ma wuxuu doonayaa inuu abid dalkaas maamulo?
Madaxweynaha Ruushka ma wuxuu doonayaa inuu abid dalkaas maamulo?
Siduu awoodda ku qabsaday?
Ma jirto cid saadaalin karta mustaqbalka dunida balse dadka daraaseeya dalkaas waxay aaminsan yihiin in Putin uu dejin karo qorshe siyaasadeed.